Amakhontrakthi Wokuthuthukiswa Kwasekhaya Ukuthengisa Nokuqasha in Birmingham, Alabama
Real Estate Listings: Business Directory Home Improvement Contractors Alabama Birmingham
Amakhontrakthi Wokuthuthukiswa Kwasekhaya in Birmingham
Amakhontrakthi Wokuthuthukiswa Kwasekhaya in Alabama
Ishicilelwe ngu Alice Bliss
ukubuka Amakhontrakthi Wokuthuthukiswa Kwasekhaya eshicilelwe 8 months ago
Home Improvement Contractors in Birmingham, Alabama
I-Alabama () yisifunda esifundeni esiseningizimu-mpumalanga ye-United States. Uganwa yiTennessee ngasenyakatho, iGeorgia ngasempumalanga, eFlorida naseGulf of Mexico ngaseningizimu, kuthi uMississippi asentshonalanga. I-Alabama yindawo enkulu yama-30 ngobukhulu endaweni futhi ingama-24 iningi labantu base-US. Njengoba inamamayela ayi-1,500 amakhilomitha angamamitha ayi-2,400, phakathi kwe-Alabama, phakathi kwezinye izifundazwe, izwe laziwa ngokuthi i-Yellowhammer State. I-Alabama yaziwa nangokuthi "Inhliziyo kaDixie" kanye ne "Cotton State". Umuthi wombuso uphayini we-longleaf, futhi imbali yombuso yi-camellia. Inhlokodolobha yase-Alabama yiMontgomery. Idolobha elikhulu kunawo wonke labantu yiBirmingham, okuyisikhathi eside idolobha elinezimboni eziningi; Idolobha elikhulu kunayo yonke indawo yiHuntsville. Idolobha elidala kunayo yonke iMobile, eyasungulwa ngabaphathi bamakoloni baseFrance ngonyaka we-1702 njengenhloko-dolobha yaseFrance Louisiana. IGreater Birmingham ingumnotho wasemadolobheni omkhulu kakhulu wase-Alabama, indawo yayo enabantu abaningi kakhulu basemadolobheni, kanye nesikhungo sayo sezomnotho. Kusukela ngeMpi YaseMelika yaseMelika kuze kube neMpi Yezwe II, i-Alabama, njengamazwe amaningi aseningizimu ye-US, yahlangabezana nobunzima bezomnotho, ngandlela thile ngenxa yokuncika kwayo okuqhubekayo kwezolimo. Kuyafana nakwezinye izifundazwe ezazikade ziyizigqila, izishayamthetho zase-Alabamian zisebenzisa umthetho kaJim Crow ukukhipha imishini futhi kubandlulula amaMelika aseMelika kusukela ekugcineni kweReconstruction Era kuze kube okungenani ngeminyaka yama-1970. Ngaphandle kokukhula kwezimboni ezinkulu kanye nezindawo zasemadolobheni, izintshisakalo zabamhlophe zasemakhaya zibusa isishayamthetho sombuso ukusuka ngo-1901 kuya ku-1960. Ngalesi sikhathi, izintshisekelo zasemadolobheni kanye nabantu baseMelika baseMelika babemelwe kakhulu. Ngemuva kweMpi Yezwe Yesibili, i-Alabama yakhula njengoba umnotho wezwe ushintsha usuka kokunye ususelwa kwezolimo usiya komunye onentshisekelo yokuhlukahlukana. Umnotho wombuso kuleli khulu lama-21 leminyaka ususelwa ekuphathweni, ezimotweni, ezezimali, ezokukhiqiza, ezokuxhumana ngezindiza, ezezokumbiwa phansi, ezezempilo, ezemfundo, ezezitolo, nezobuchwepheshe.